သီချင်းဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ 500 Euro နဲ့အတူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့မှာ နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေနဲ့ သီချင်းပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ခွင့်
FNFMyanmar နှင့်အတူ လွတ်လပ်မှုအကြောင်းရေးစပ်ထားသည့် သီချင်းများကို လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
မည်သည့်သီချင်းအမျိုးအစားကို မဆို ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်နိုင်ပြီး လွတ်လပ်မှုအကြောင်း နှင့် ပတ်သက်ကာ ရေးစပ်သီကုံးထားတဲ့ လေးမိနစ်ထက်မပိုတဲ့ သီချင်းများ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပါ google form ကနေ တစ်ဆင့် ဖြည့်စွက်ကာ လျှောက်ထားနိုင်ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပထမဆန်ကာတင်ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမှာ ကျင်းပမယ့် regional song contest ပြိုင်ပွဲမှာ အခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံများက ပညာရှင်များနှင့်အတူ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါ regional ပြိုင်ပွဲကနေ တစ်ဆင့် ထူးချွန်သူတွေကတော့ ဂျာမနီမှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲအထိ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
"လွတ်လပ်မှု၊ တာဝန်ခံမှု”နှင့် ပတ်သက်သည့် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် သီကုံးရေးစပ်ထားသည့် သီချင်းများ ဖြစ်ရမည်"
ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်သူများအနေနဲ့ ဘာတွေ ရရှိနိုင်မလဲ? –
ပထမဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်သူကို သီချင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပံ့ပိုးငွေ ယူရိုငွေ ငါးရာနှင့်ညီမျှသည့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၇ သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်အနုပညာရှင် တစ်ဦး၏ regional နှင့် ပြည်တွင်းအတွက် အနီးကပ် သင်ကြားပြသပေးမှု
မိမိ၏ သီချင်းအား အခြားသော အာဆီယံနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲဝင်များ၊ အနုပညာရှင်များရှေ့တွင် ဖျော်ဖြေခွင့် နှင့် သီချင်းပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခွင့်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့သို့ အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်နှင့် တည်းခိုခွင့်
FNFMyanmar နှင့် FNFSEEA အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများထက်တွင် Live သီဆိုဖျော်ဖြေခွင့်
အတွေ့အကြုံရှိ အနုပညာရှင်တစ်ဦး၏ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှု
ပြည်တွင်းရှိ နာမည်ကြီး ရေဒီယိုဌာနများတွင် သီချင်းထုတ်လွှင့်ခွင့် (Cherry FM)
မည်သည့် သီချင်းအမျိုးအစားများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလဲ?
လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးမိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သီချင်းအကြောင်းအရာ ဖြင့် ပုံဖော်နိုင်သည့်မည်သည့် အကြောင်းအရာမျိုးကို မဆို ပါဝင် ရေးသားပေးပို့နိုင်သည်။ ‌
FNFMyanmar ရုံးမှ ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Online voting စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မှု သည်လည်း (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းအနေ ဖြင့် အကျုံးဝင်မည်။ ဖြစ်ပါသည်။
FNF Myanmar ရုံးနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ ၀ါရင့် သီချင်းအနုပညာရှင် ၂ ယောက်တို့မှ အမှတ်ပေးရွေးချယ်မည်။
Online voting စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မှုသည်လည်း (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း အကျုံး၀င်မည်။
ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ ? –
သီချင်းဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူသည် လေးမိနစ်ထက်မကျော်သည့် ကိုယ်ပိုင်ရေးသားထားသော သီချင်းကို youtube/ wetransfer/ dropbox တွင်တင်ထားပြီး Link အား FNF Myanmar သို့ Application Form ဖြင့် ပေးပို့ရမည်။
Application Link - https://docs.google.com/forms/d/1YcxfMj29-TPaxNdBThakDkrl49BsyGZ-Rejbnk…
သီချင်းအား အဂ်လိပ် (သို့) မြန်မာဘာသာဖြင့် သီဆိုထားပြီး လေးမိနစ်ထက်မပိုသည့် မည်သည့်သီချင်းအမျိုးအစားမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီးရီးခွေ မထုတ်ထားဖူးသည့် မျက်နှာသစ်များအား ဦးစားပေးယှဉ်ပြိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ -
အသက် ၁၈ မှ ၄၀ နှစ်အတွင်းရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် Passport ရနိုင်မည့်သူများသာ လျှောက်ထားပါရန်။
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများနှင့် သီချင်းလင့်များကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်နှင့် သြဂုတ်လများတွင် ဆန်ကာတင် ၅ ဦးအား ဆရာမြင့်မိုးအောင်မှ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှုပေးမည်။
စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်တွင် Online Performance။
သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလတို့တွင် Partner Radio Station များ (Cherry FM) တွင် သီချင်းထုတ်လွှင့်ခွင့်နှင့် social media voting စနစ်ဖြင့် မဲပေးအကဲဖြတ်မှု။
စက်တင်ဘာလတွင် နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်တစ်ဉီးကို လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး
စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာလများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆန်ကာတင်အား Regional မှ အနုပညာရှင်တစ်ဦး၏ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှု
နိုဝင်ဘာလတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ပြိုင်ပွဲသို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကိုဗစ်အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နို၀င်ဘာပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပါက ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ဖျော်ဖြေခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည်များ၊ မေးလိုသည်များကို -
သန်းနိုင်အောင် (FNF Myanmar)
than.aung@fnst.org၊ ဖုန်း - ၀၉၄၂၁၀၈၄၅၅၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Living Freedom Song Contest ( Google Form )
Enter this link to fill up the form